Rikooo मा उत्तम xXUMX?
प्रश्न Rikooo मा उत्तम xXUMX?
2 वर्ष3महिना पहिले #522 by ItzDan
नक्शा प्रदर्शित गर्न सकिँदैन, तपाईंले अहिले सम्म कुनै स्थान निर्दिष्ट गर्नुभएको छैन।
के कसैलाई थाहा छ कि XXUMX ले मलाई प्राप्त गर्नु पर्छ
2 वर्ष3महिना पहिले -2वर्ष3महिना पहिले #525 by Dariussssss
न त निश्चित छ कि म यो प्राप्त गर्दछ ... के तपाईं फ्रीवेयर या payware मतलब छ, कुन सिम्युलेटर को लागि?
फ्रिवेयर, त्यहाँ मात्र एक-परियोजना एयरबस A380 हो। Payware, धेरै को एक ... विल्को, AFS ... तिनीहरूलाई पनि सम्झन सक्दैन।
अधिक जानकारी राम्रो हुनेछ।
अन्तिम सम्पादन:2वर्ष3महिना पहिले Dariussssss.
2 वर्ष3महिना पहिले #535 by Gh0stRider203
कुनै पनि छैन। यो एयरबस ....... Boeing lol संग जानुहोस्
2 वर्ष3महिना पहिले #536 by Dariussssss
लगभग सबै सिमहरू जुन म जान्छु, एयरबस विमानहरू बेकार छन्। म वर्षको लागि कडा मेयु एयरबस प्रशंसक हुनुहुन्थ्यो, र यसको कारणले मात्र मेरो पछाडि घुमाउनुपर्दछ।
म सबैभन्दा खुसी मानिस एक जीवित मानिस हुनेछ कि यी विमानहरूले जस्तै बोइङ जस्तै विकसित गरे, तर ... यो लामो शट हो।
2 वर्ष3महिना पहिले #537 by Gh0stRider203
तपाईं गलत को रानी संग गलत नहीं जा सकते
त्यो 1970 पछि उत्पादनमा भएको छ; त्यो 1986 पछि संयुक्त राज्य को राष्ट्रपति को लागि प्राथमिक परिवहन भएको छ; त्यो आँखामा REAL सजिलो छ; यदि तपाईं सही मोड (यहाँ Rikoooo मा, म एक खराब शब्द को बारे मा भन्न सक्दैन, र यो मलाई पायलट रूपमा छैन, एक मध्यस्थ), त्यो एक सपना जस्तै संभालती;
म थप भन्न चाहिए?
लामो जीवन रानी! (जो 747 त्यो छ)
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.320 सेकेन्ड